Vnote, fampiharana maimaim-poana haka naoty ao amin'ny Markdown | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny VNote isika. Ity dia fampiharana iray handraisana naoty ao amin'ny Markdown, izay loharano malalaka sy malalaka. Azo alaina ho an'ny Gnu / Linux, Windows, ary macOS izy io. VNote manandrana ho tonian-dahatsoratra Markdown matanjaka miaraka amin'ny fitantanana naoty, na fampiharana fandraisana naoty miaraka amin'ny fanohananana tsara an'ity fiteny fanamarihana ity. Navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana MIT izy io.
Manolotra ity programa ity fanohanana ny naoty an-tsoratra tsy mila database. Manohana HTML, PDF ary PDF misy sary izy io. Io dia hahafahantsika mampiditra sary ao anaty naotintsika mivantana avy amin'ny solaitrabe ihany koa. Soso-kevitra mahasoa hafa ny fikatsahana lahatsoratra feno, fanasongadinana ny syntax, fanohanan'ny HiDPI, lohahevitra sns.
Amin'ity fitaovana ity dia saika azo alamina daholo ny zava-drehetra, manomboka amin'ny loko afara ka hatramin'ny endritsoratra, amin'ny endriny Markdown. VNote dia mampiasa rakitra an-tsoratra tsotra handraketana ny toerana napetrany, mba hahafahanao maka tahaka izany mba hanombohana VNote vaovao amin'ny solosaina hafa.
Ity programa ity manolotra hitsin-dàlana ho mora fanovana, ao anatin'izany ny maody Vim, ny maody Kapiteny ary ny fomba fitetezana, izay ahafahantsika miasa tsy misy totozy. Io dia mety ho manatona ny fanampian'ny fitambaran-kitendry ao amin'ny menio fanampiana raha mila fanazavana fanampiny.
1 VNote endri-javatra ankapobeny
2 Sintomy ny rakitra VNote AppImage
VNote endri-javatra ankapobeny
Manolotra a fitantanana naoty tsotra. Ny naoty rehetra noforonina dia tantanan'ny fisie fikirakirana izay tehirizina ho rakitra an-tsoratra tsotra. Hahafahantsika miditra amin'ireo naotinay raha tsy misy VNote. Ho an'ity dia afaka mampiasa serivisy fampitahana rakitra ivelany izahay handefasana ireo notsorinay sy hampidirana azy ireo amin'ny milina hafa.
Fampidirana ankapobeny sy fikarohana amin'ny endriny feno. VNote dia manana fikarohana an-tsoratra an-tsoratra an-tsoratra matanjaka fanohanana ny fitenenana mahazatra sy ny fikarohana fuzzy.
Manohana i VNote fanasongadinana ny syntax mazava ho an'ny Markdown. Ny fanitsiana ny fomban'ny fanasongadinana dia hahafahantsika mitazona mora foana ny antotan-taratasinay.
Tsy mamela ampidiro mivantana avy amin'ny clipboard ny sary. Tsy maintsy apetantsika ao anaty naoty fotsiny ny sarintsika, VNote no hitantana ireo zavatra hafa rehetra. Ny programa dia mitahiry ireo sary ao anaty fampirimana mitovy amin'ilay naoty. VNote dia hanokatra varavarankely hijerena mialoha ny sary rehefa ampidirintsika.
VNote dia manohana matanjaka topi-maso in situ ho an'ny sary, ny kisary ary ny raikipohy amin'ny maody fanovana.
Hanana ny fahafaha-mampiasa isika ambaratonga tsy misy fetra ny lahatahiry.
Mariho ny firaketana.
Lohahevitra sy maody maizina.
Fanondranana manankarena sy azo itarina, toy ny HTML, PDF ary PDF misy sary.
Viewer skemaika mifandraika amin'ny fomba famakiana sy fanovana. VNote dia manome mpijery skemaika mora ampiasaina ho an'ny maody fanovana sy hijerena.
Ireto ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ny Vnote. Afaka mianatra bebe kokoa momba azy rehetra ianao ao amin'ny Pejy GitHub an'ny tetikasa.
Sintomy ny rakitra VNote AppImage
Afaka mampiasa VNote ao Ubuntu izahay amin'ny alàlan'ny fisie AppImage izay atolotray anay ao amin'ny tranonkalany. Tsy maintsy ampidino ny fampiharana VNote ao amin'ny rafitray avy amin'ny pejy mamoaka Avy amin'ity tetikasa ity.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia tsy maintsy tsindrio havanana amin'ny rindranasa .AppImage alaina ary safidio "Propiedades”. Avy eo dia tsy maintsy mandeha any amin'ny vakizoro isika "alalana"Ary asio marika ao anatiny ny fisavana fa"Avelao hitantana ny fisie ho programa"Mba hanomezana alalana sy hahafahana manatanteraka ny programa. Safidy hafa ho an'ny manova alalana takiana, hampiasa ireto baiko manaraka ireto ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T). Hifindra amin'ny folder aloha isika, izay nitehirizantsika ny fisie nakarina:
Ho an'ny baiko manaraka izay hataonay, ny fisintomana dia 'VNote-2.8-x86_64.AppImage'. Mety hiova izany rehefa miova ny kinova amin'ilay programa. Ireto ny baiko hamono amin'ny terminal mitovy:
Aorian'izany, azontsika atao ny mandefa ilay programa amin'ny alàlan'ny fanatanterahana amin'ny terminal mitovy:
Safidy iray hafa hampandehanana ny programa ny tsindry indroa amin'ny rakitra alaina. Afaka manomboka mampiasa an'ity programa ity amin'ny rafitray isika amin'izany. Raha tianao ny manoratra naoty Markdown handalina, hiasa na hiaina, ity fitaovana ity dia mety ho tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Vnote, fampiharana maimaim-poana haka naoty ao amin'ny Markdown
Microsoft Teams, misy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny Gnu / Linux